Fihaonana ara-toekarena : Atao any La Réunion ny FEIOI faha-12 -
AccueilSongandinaFihaonana ara-toekarena : Atao any La Réunion ny FEIOI faha-12
Fihaonana ara-toekarena : Atao any La Réunion ny FEIOI faha-12
Tontosa teto Antananarivo nandritra ny 3 andro ny andiany farany. Nandritra ny lanonam-pamaranana mikasika ny fihaonambe ara-toekarena ataon’ireo Nosy aty amin’ny ranomasimbe Indiana, na ny FEIOI no nahafantarana fa atao any La Réunion ny andiany faha-12 amin’io fihaonana io. Toa ireo andiany teo aloha, misy hatrany ny tanjona apetraka isaka ny fihaonana, ka amin’ny taona ho avy dia « ny fampirisihina ireo manam-pahefana hanala ireo sakana amin’ny fivelaran’ny toe-karena aty amin’ny faritra, ary hanohana ireo famaranana ny fiaraha-miasa eo amin’ny fandraharahana amin’ny alalan’ny fivoariana B2B », araka ny fanazavan’ny filohan’ny fiombonan’ireo antenimieran’ny varotra aty amin’ny ranomasimbe indiana, Pascal Plante. Ho fantatra amin’ity volana ity kosa ny lohahevitra entina amin’io andiany io.
Raha hiverenana ny andiany faha-11 teto Antananarivo, izay nifarana ny zoma lasa teo, dia natokana ho an’ny fiaraha-miasa eo amin’ny ranomasimbe Indiana sy ny kaontinanta afrikana ny lohahevitra, ary manodidina ny 200 ireo mpandray anjara. Ny fihaonana dia nahafahana nanatanteraka fifandraisana B2B maherin’ny 250.
Maromaro ireo fanamby nivoitra tamin’io fihaonana io, toa ny fanamafisana ireo asa fanatsarana ny fifandraisana an-dranomasina, ny nomerika ary ny an’habakabaka, ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin’ny fandraharahana eo amin’ny ranomasimbe Indiana sy afrika ary ny tsena afrikana. Toa izany koa ny fijerena ireo fanondranana entana eo amin’ny faritra, ny fitrandrahana tsena vaovao, ary ny fanentanana ireo tompon’andraikitra amin’ny fivezivezena malalaka eo amin’ny olona sy ny entana, ary ny antontam-baovao samihafa.
Nandritra io hetsika io ihany koa no nanatanterahana ny andiany faha-5 tamin’ny hetsika Voatra izay nahita tranoheva 70 nahitana sehatr’asa samihafa toa ny asa tanana, ny lamba, ny momba ny fambolena sy ny fiompiana, ny fanodinana ara-tsakafo, ny Tic, ny fizahantany, ny angovo azo havaozina…
« Amin’izao zava-misy eto amin’ny firenena izao dia miangavy antsika rehetra, n’inona n’inona tsy fitovian-kevitra, mba hiaro ny fianaran’ny zanatsika sy zandrintsika. Isika rehetra dia miara-manaiky fa any am-pianarana no tokony hisy ny mpianatra. Efa ...Tohiny